နောက်ဆုံးထွက် Kindle Oasis ရောက်ပြီ! ~ The ICT.com.mm Blog
🎉နောက်ဆုံးထွက် Kindle Oasis ရောက်ပြီ! 🎉
Amazon Kindle Oasis (2019) 10th Generation Graphite (32GB)ကို ICT.com.mmမှာ ဝယ်လို့ ရပါပြီ။ Amazon ဘရန်းဒစ် ကျပ်ငွေ ၃၈,၀၀၀ တန်ဖိုးရှိတဲ့ 5W USB Charger တစ်လုံးကိုလည်း လက်ဆောင်ပေးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီ နောက်ဆုံးထွက် Kindle Oasis ကတော့ ရေစုံခံတဲ့အပြင်၊ adjustable warm lightနဲ့ဆိုတော့ စာတွေအများကြီးဖတ်တဲ့ ICT ပရိတ်သက်ကြီးအတွက် မျက်စိထိခိုက်မှုကို ကာကွယ်ပေးနိုင်မှာပါ။ ဒါ့အပြင် Kindle ကြိုက်နှစ်သက်သူများအားလုံး သိကြမယ့် e-ink နည်းပညာကို သုံးထားတော့ စာရွက်အစစ်ပေါ်မှာ စာဖတ်နေရတဲ့အတိုင်း ခံစားရဦးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
မျက်နှာပြင် 7″ ရှိပြီး, 300 ppi flush-front Paperwhite displayနဲ့ဆိုတော့ ပေါ့ပါးပြီး စာအုပ်တစ်အုပ်ထက်တောင် သယ်ဆောင်ရ ပိုလွယ်ကူပါသေးတယ်။
Amazon အကောင့် ရှိပြီးသားဆိုရင် Millions နဲ့ချီတဲ့ books, newspapers, and audiobooksတွေကိုလည်း ချက်ချင်း ဖတ်ရှုနိုင်မှာပါ။ Audiobooksပဲ နားထောင်ချင်သူများအတွက်လည်း bluetooth headphones အသုံးပြုပြီး နားဆင်နိုင်ပါတယ်။
Limited Stockဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် ဒီနေ့ဝယ်မှ စိတ်ချရမှာပါ။ 😉
မိမိစာအုပ်ကို တန်ဖိုးထားသလို သန်းချီတဲ့ စာပေဗဟုသုတတွေကို ရှာဖွေလို့ရတဲ့ ဒီ digital deviceကို တယုတယ ကိုင်ဆောင်ချင်တယ်ဆိုရင်လည်း Amazonရဲ့ အော်ရီဂျင်နယ် ကာဗာကို အောက်ပါလင့်မှ တစ်ဆင့် ဝယ်ယူနိုင်ပါတယ်။
*** ဒီ productကို ရန်ကုန်မှဆိုလျှင် မနက်ဝယ် ညနေပို့ပေးပြီး၊ အခြား ပြည်နယ်နှင့် တိုင်းများမှဆိုပါက ၂၄ နာရီအတွင်း အရောက်ပို့ပေးပါတယ်။ ***
Newer နောက်ဆုံးပေါ် Processor ကိုထည့်သွင်းပေးထားတဲ့ Redmi K20 Pro Premium Edition စမတ်ဖုန်း
Older OnePlus ပရိသတ်တွေအတွက် OnePlus 7T Pro